Smart plug တစ်ခုဝယိကြရအ​ောင် - Myanmar Tech Reviews
by admin/ September 18, 2018/ Gadgets, Reviews/
ယန​ေ့အချိန်မှာ ကျွန်တ​ော်တို့လက်လှမ်းမှီတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ ပလပ်ခေါင်းအမျိုးမျိုး အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှိပါတယ်။ Smart plugs တွေဟာသူတို့က သင့်အိမ်အတွက် သက်ထောင့် သက်သာ အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် သင့်၏ခေတ်မီသောအိမ်ရဲ့ဂေဟာစနစ်ကို ယူဆောင်လာပေးသော အရာဖြစ်သည်။သင် အိမ်အတွက်ဘယ်လို မျိုး အရာကို မှန်ကန်အောင် ရွှေးချယ် ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရအ​ောင်။
ပထမဆုံးနဲအ့ရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက လိုချင်သော Smart Plug ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် တွဲရန် Service များ Voice အကူများ ရှိလားဆိုတာကို သိရမည်။ သင့်၏ အသံနှင့်စက် ကိုထိန်းချုပ်ရန်ု ဘာကိုခွင့်ပြုသင့်သလဲ နှင့် သင့်အိမ် ၏ ကျန်ရှိသော အရာ နှင့် ပေါင်းစပ် လုပ်ဆောင် ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
Smart plug အားလုံးက အသံအကူအားလုံးနဲ့ အဆင်မပြေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင် က Apple HomeKit ကိုသာလျှင် အသုံးပြုလျှှင် ဒီလိုမျိုး ရ​ွ​ေးချယ်မူအများကြီးကိုမလုပ်ရတော့ပါ ဒါပေမဲ့ iHome နှင့် iDevices သည် စတင် အသုံးပြုရန် အသင်ုတော်ဆုံးနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ခုလုံး၏ အားသွင်းပေါက်များသည် HomeKit နှင့် အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး သူတို့သည် အလင်းနှင့်အခြားပစ္စည်း များအတွက် outdoor လုပ်ဆောင်မူများကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ Google Assistant နှင့် Amazon Alexa သည် သင့်၏ ခေတ်မီသော အိမ်အတွက် အဓိက နေရာဖြင့်ညွန်ကြားနေလျှင် သင် သည် ရွှေးချယ် မူ အများအပြားရှိလိမ့်မည်။ မိမိဝယ်လိုသ​ော Smart Plug ထုတ်ကုန်၏ ဖော်ပြချက်ကို သေချာအောင် စစ်ဆေးလိုက်ပါ။
သင့်စက်ပစ္စည်း၏ နေ့စဉ် အပတ်စဉ် လစဉ်အသုံးပြုခြင်း လျှပ်စစ်သုံးစွဲမူဘယ်လောက်ရှိသလဲ(kWh) ဆိုတာကို ပြသပါသည်။ ဒီဖော်ပြချက်သည် Smart plug နှင့်ပက်သက်သော Appတွင် ပြပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်ရျ် သင်သည် vampire energy နှင့် ပက်သက်ပြီးသိချင်လျှင် ဒါမှမဟုတ် သင့်၏ စွမ်းအင်ကို ဆွေတာပြီးသုံးစွဲချင်လျှင် စွမ်းအင်ဖော်ပြချက်တွေက သင်ကို ကူညီပေးမည်။
၃. အချိန်ကိုက်မူရှိခြင်း နှင့် ဖြစ်စဉ်
Smart Plug ကို သေးငယ်သော တွဲဖက်ပစ္စည်း ပန်ကာ ၊ မီးအလင်းရောင် သို့ တီဗီကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်၏စက်နှင့် အလို အလျှောက် အဖွင့် အပိတ် ကိုချိန်ထားနိုင်ပါသည်။ Smart Plug အများစုက ဒီရွှေးချယ် မူကို ပေးပါသည်။ မနက်ခင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာ နှင့် အိပ်ရာ ဝင်ချိန် လုပ်ဆောင်တာတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။အချို့ smart plugs appတွေက နေ့တိုင်း သို့ နေထွက်ချိန် နှင့် နေဝင်ချိန် တို့ကိုတောင် အချိန်ကိုက် ထပ်ခါထပ်ခါပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်ရျ်များ သင် ၏ smart plug က Google Assistant နှင့်် Alexa ဖြင့်အလုပ်လုပ်လျှင် သင်သည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သင်TVမှာ (Alexa , Movie time) ပူးပေါင်း နိုင်သည်။
Smart plug ကို လက်တွေ့ အသုံးပြုခြင်း တစ်ခုက သူရဲ့သဘော တရား အသုံးဝင်မူမူလိုခေါ်ပါသည်။သင်ကြိုက်သော အချိန် နှင့် နေ့ တွေကို အချိန် ချနိုင်သည် ပြီးနောက်သင်သည် အိမ်နှင့် အဝေးကိုရောက်နေလျှင် အဖွင့် အပိတ်ကို plug က အလိုအလျှောက် ခိုင်းပေးပါသည်။
၅. ဒီဇိုင်းကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်
Smart Plug ဒီဇိုင်း က အနည်းတော့ရူပ်ထွေးသည် ။အချို့သော ပုံစံတွေက ခန့်မှန်ထားတာနှင့် ရဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ ဥပမာ သင်က နောက်ထပ် Smart Plug တစ်ခုနဲ့ ထပ်ဆင့် အသုံးပြုလျှင် သင်သည် Outlet ထွက်ပေါက်နှင့် ကိုက်ညီမူရှိအောင် သိဖို့ လိုလိမ့်မည်။
အပြောကတော့လွယ်ပေမဲ့ အချို့ သော အရာကို ကြည့်လိုက်လျှင် သေးပြီး မှားယွင်းနေသောပုံစံဖြင့် ကြားခံ ပလတ်ပေါက် နှင့် ပေါင်းရသည်။
သင် သည် ကော်ဖီဖျော် စက်နှင့် TV အကြီးကြီးတွေလို့ မျိုး ခေတ်မီအသုံးပြုချင်နေလျှင် Smart Plug သည် သင်အိမ်မှာရှိသော စက်ပစ္စည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်သည် ဘယ် စက်နှင့် ဘာကိုတွဲရျ် အလုပ်လုပ်ချင်လဲ ဘယ်နေရာအတွက် အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ချင်တာလဲကို သိဖို့ မှန်ကန်သော ပလတ် ကို ရွှေးချယ်ဖို့လိုသည်။